कसरी गर्छन् महिलाले ‘ह’स्त मै’थुन’ ? – Kavrepati
Home / रोचक / कसरी गर्छन् महिलाले ‘ह’स्त मै’थुन’ ?
admin September 17, 2021	रोचक Leaveacomment 442 Views
हामी कहिले काहीँ यस्तो यौ- न सुख लिन रुचाउँछौं, जहाँ हामी नितान्त एक्लो हुन्छौं । त्यहाँ कोही नहोस् । यति लामो समयपछि म आफ्नो दे-हसँग एकदमै सहज छु । म आफैले आफैबाट यौ-न सुख प्राप्त गर्न सक्छु । म आफ्नो पार्टनरबाट के चाहन्छु ? यस सम्बन्धमा पनि मसँग आत्मविश्वास छ । हरेकको का-मुक अलग अलग तरिकाको हुन्छ । मलाई लाग्छ, ह स्त मै-थुन सबैभन्दा सहज र सुरक्षित तरिका हो । कुनैपनि किसिमको स्पर्शबाट तपाईं यौ न सुख लिन सक्नुहुन्छ । यसले अरुलाई कुनै हानी गर्दैन । अरुलाई असर गर्दैन ।
राम्रो निद्रा र त-नावमुक्ती:- ह स्त मै-थुनले केही ओखतीको काम पनि गर्छ । यसबाट तपाईंले गहिरो निद्रा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । साथै त-नावबाट मुक्त पनि रहन सक्नुहुन्छ । अरु औषधिबाट यस्तो कुरा सहजै प्राप्त हुँदैन, जुन हस्तमै-नबाट हुन्छ । यसका लागि यौ -न उ-त्ते जनालाई बुझ्ने कक्षा हुनुपर्छ । ह स्त मै-थुनले तपाईं र तपाईंको यौ-नजीवनलाई अरु सशक्त बनाउँछ ।
Previous काठमाडौंका पुरुष बे’श्याको कमाई : एकपटक सेवा गरेको १० देखि २५ हजारसम्म
Next आमाले आफ्नै बुबाको पेट बोकिस भनेपछी छोरीले दिइन कडा जबाफ (भिडियो सहित)